३० नाघ्नुभयो ? मुख जचाउनुहोस् | चितवन पोष्ट
गृह » ३० नाघ्नुभयो ? मुख जचाउनुहोस्
३० नाघ्नुभयो ? मुख जचाउनुहोस्
– रमेशकुमार पौडेल
क्यान्सरको नाम सुन्दा धेरै जना झसंग हुन्छन् । तर, समयमै पत्ता लगाएर उपचार गरे यो रोग पूर्णरुपमा निको हुन्छ । विश्वमा क्यान्सरको संख्या बढ्दो अवस्थामा नै छ । तर, यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पत्ता लगाएर उपचार गरेर निको बनाउने प्रयास पनि बढिरहेकै छ । नेपाल पनि यही अभियानमा छ । सवै खालका क्यान्सरको सुरूमै उपचार गर्ने योजना सरकारले ल्याएको छ । सवै खालका क्यान्सरहरु बढ्दो अवस्थामा छन् ।
यसैगरी शरीरको शीर्ष भाग, टाउको, मुख र घाँटीवरपर लाग्ने क्यान्सरको संख्या पनि पछिल्लो समय बढ्न थालेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षयता हरेक वर्ष यी अंगमा क्यान्सर लागेर आउने बिरामीको संख्या बढ्न थालेको उपचार र अनुसन्धानको क्षेत्रमा सक्रिय विज्ञहरु बताउँछन् । यस्ता क्यान्सरका बिरामी समुदायमा भए÷नभएको पत्ता लगाउने अभियान पनि सुरू हुन थालेको छ । तर, त्यो पर्याप्त भने देखिँदैन । चिकित्सक तथा क्यान्सर नियन्त्रणको क्षेत्रमा सक्रिय विज्ञहरु ३० वर्ष नाघेका हरेकले मुखको परीक्षण गराउने परिपाटी सुरू गर्नु राम्रो हुने बताउँछन् । यसका साथै कसैले सुर्ती, चुरोट, खैनी, गुड्खा, पान, मदिरा खान्छ भने त्यसको उमेर ३० वर्ष नभए पनि परीक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ । मुखभित्र रहेका साना घाउ–खटिरा पनि पछि क्यान्सरको कारण बन्न सक्छ । त्यसैले, सुरूमैै परीक्षण गरे राम्रो हुने चिकित्सकहरुको भनाइ छ ।
भरतपुरमा रहेको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल क्यान्सरको उपचार हुने देशको मुख्य अस्पताल हो । सो अस्पतालको नाक, कान, घाँटी (इएनटी) विभागका प्रमुख डा. देजकुमार गौतम भन्छन्– ‘म सन् २००५ देखि यो अस्पतालमा कार्यरत छु । मुख, घाँटी र टाउकोसँग सम्बन्धित क्यान्सरका बिरामीहरुको संख्या बर्सेनि बढ्दै आएको छ ।’ बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा क्यान्सर अनुसन्धान, रोकथाम तथा नियन्त्रण युनिट पनि छ । सो युनिटले सन् २०१२ देखि १६ सम्म अस्पतालमा उपचार गराउन आएका सबै खाले क्यान्सरका रोगी र टाउको तथा घाँटी तथा मुखका क्यान्सर भएका बिरामीहरुको संख्या अनुगमन गर्दै आएको छ, जसमा एक वर्षबाहेक अरु वर्ष बिरामीको संख्या र प्रतिशत बढ्दो छ ।
‘सन् २०१२ मा कुल बिरामीमध्ये साढे १४ प्रतिशत बिरामी मुख, टाउको र घाँटीको (इएनटी) क्यान्सरका थिए । सन् १३ मा अघिल्लो वर्षको भन्दा समग्रमा क्यान्सरका बिरामीहरु पनि घटे । त्यो वर्ष इएनटी क्यान्सरका बिरामीको संख्या १३ प्रतिशत थियो’– अस्पतालको क्यान्सर अनुसन्धान, रोकथाम तथा नियन्त्रण विभागका प्रमुख भोला सिवाकोटीले भने । तर, अर्को वर्षदेखि बढ्न थाल्यो । सन् १४ मा यस्ता क्यान्सरका रोगीहरुको संख्या साढे १५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो । सन् १५ मा साढे १६ प्रतिशत नाघ्यो भने सन् १६ मा १७ दशमलब सात प्रतिशत पुगेको छ । ‘क्यान्सर रोग लागेपछि सुरूकै अवस्थामा उपचार गराउन आए निको हुने हो । तर, इएनटीसँग सम्बन्धित क्यान्सरका बिरामीहरु प्रायः अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल आउँछन्’– डा. देजकुमार गौतमले भने ।
सुर्ती र चुरोट खानेलाई सताउने क्यान्सर ः अस्पतालले टाउको, मुख र घाँटीवरपरका विभिन्न २३ स्थानमा लाग्ने क्यान्सरलाई इएनटीअन्तर्गत राख्ने गरेको छ, जसमा मुखसँग सम्बन्धित क्यान्सरका बिरामीहरु धेरै नै हुन्छन् । खैनी, सुर्ती र चुरोट खानेहरुलाई यस्तो क्यान्सर हुने सम्भावना प्रबल रहने चिकित्सकहरु बताउँछन् । दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा नै यस्तो खाले क्यान्सरको खतरा धेरै रहने गरेको छ । ‘सुर्ती खाने र चुरोट खानेमध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशतलाई मुखको क्यान्सर हुने खतरा रहन्छ’– क्यान्सर अस्पतालका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका चिकित्सक डा. देजकुमार गौतमले भने । पछिल्लो समय युवा र किशोरहरुमा गुट्का खाने चलन अत्यधिक बढेको हुँदा यो रोग नियन्त्रणमा गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको भोला सिवाकोटीको भनाइ छ । सन् २०१६ मा भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालमा क्यान्सर भएका कुल चार हजार ५४८ बिरामीले उपचार सेवा लिए, जसमा पाठेघरको क्यान्सरका बिरामी १३ दशमलब तीन प्रतिशत र फोक्सोको क्यान्सरका बिरामी १३ प्रतिशत थिए । टाउको, मुख र घाँटीमा २३ प्रकारका क्यान्सर भएका बिरामीको संख्या १७ प्रतिशत नाघे पनि मुखको मात्रै क्यान्सर भएका लगभग चार प्रतिशत थिए । ‘मुखको क्यान्सर सातौँ स्थानमा छ । फोक्सोको क्यान्सर दोस्रोमा छ । यी क्यान्सरको प्रमुख कारण चुरोट र सुर्ती खाने बानी नै हो ।
तर, सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम उठाउन सकेन’– नेपाल अर्बुद रोग (क्यान्सर) निवारण संस्था चितवन शाखाका सभापति दिनेश चुकेले भने ।गाउँगाउँमै परीक्षण गर्ने तयारी ः टाउको, मुख र घाँटीमा क्यान्सर भए÷नभएको पत्ता लगाउन खासै गाह्रो छैन । क्यान्सर अस्पतालको क्यान्सर अनुसन्धान, रोकथाम तथा नियन्त्रण विभागका प्रमुख भोला सिवाकोटी गाउँका स्वास्थ्य केन्द्रमा नै यो रोग लागे÷नलागेको परीक्षण गर्न सम्भव छ । गाउँमै परीक्षण भए ढिला उपचार गर्न आउने परिपाटी रोकिने छ । ‘चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुका पाँच जिल्लामा समुदाय तहमा परीक्षण सुरू गर्ने तयारी छ’– सिवाकोटीले भने । यसका लागि स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुखहरुलाई तीन दिनको तालिम दिन सुरू गरिएको छ । पुसको पहिलो हप्तामा एउटा टोलीले तालिम लियो । यसरी नै पाँच जिल्लाका लगभग दुई सय स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने सिवाकोटीले बताए ।
‘तालिमका बेलामा हामीले प्रयोगात्मक कक्षाका रुपमा तीन सय जनाको परीक्षण गरेका थियौँ । तीमध्ये १३ प्रतिशतलाई क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना देखिएको थियो’– सिवाकोटीले भने । शंकास्पद देखेका व्यक्तिहरुको थप परीक्षण गरेरमात्रै क्यान्सर भए÷नभएको यकिन गरिने उनले बताए । तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले सामान्य उपकरण र प्रत्यक्ष हेरेको भरमा प्रारम्भिक आँकलन गर्ने रोग हो यो । ‘मुख्य रुपमा रक्सी, चुरोट, सुर्ती खानेलाई इएनटीसम्बन्धी क्यान्सर हुने खतरा रहने हो । केहीलाई भाइरसका कारणले पनि हुन्छ । हामीले परीक्षण गर्दा रक्सी, सुर्ती, चुरोट खाने गर्दछ भने ३० वर्षभन्दा कम उमेरकालाई पनि परीक्षण गर्ने र ३० वर्षभन्दा माथिका सबैको गर्ने नीति बनाएका छौँ’– सिवाकोटीले भने । प्रभावकारी काम गरेर महिनामा हजार जनामा परीक्षण हुने अवस्था छ ।
अचेत होइन, सचेत बनौँ